🥇 ▷ OPPO Reno2 waxaa lagu soo bandhigi doonaa Ogosto 28 oo leh afar kaamirooyin iyo 20x zoom optical ah ✅
OPPO Reno2 waxaa lagu soo bandhigi doonaa Ogosto 28 oo leh afar kaamirooyin iyo 20x zoom optical ah
Waqti ayaa laga soo gudbay ilaa OPPO ay u magacowday taleefannadeeda heerka sare ah ee leh magaca reer Reno, oo soo saaray tiro yar oo moodooyin ah oo hadda kicinaya adduunka isla markaana xoojinaya R iyo RX ee khadadka dhexe iyo hoose. Waqti aad u badan ayaa maray in jiilka labaad uu horeyba ugu fadhiyo albaabka bandhigiisa, waana sumadda lafteeda ee mas’uul ka ah shaacinta.
Telefoonka mustaqbalka, ama taleefannada waxaad tixraaci kartaa “taxanaha”, waxay noqon doontaa OPPO Reno 2 astaantiina wax yar ayey ka dhex muuqatay muuqaalkeeda casuumaadda. Sawir naga soo xiganaya 28-ka Ogosto ee Hindiya, oo ah meesha ay doorteen soo-saare Shiine ah inuu soo bandhigo waxa ay noqon doonto qadka taleefanka xiga.
Bilowga, hore ayaan u ognahay in OPPO Reno2 loo qori doono sidan oo kale, oo aan lahayn boosas, laakiin meesha laga soo galo waxaa jira xog dheeraad ah. Sida xaqiiqda ah inay noqon doonto taleefan lala yeesho afar kamaradood gadaasheeda, ugu yaraan mid ka mid ah kuwa la soo bandhigay. Iyo marka loo eego muuqaalka casuumadda, waxay umuuqataa inay jiri doonaan, min weyn ilaa yar, qaybta dhexe ee dhabarka qaab toosan.
Laakiin kuma qanacsani, OPPO wuxuu noo sheegayaa in kamaraddan ‘Quad camera’ ay muuqan doonto ilaa labaatan weyne weyne oo loogu talagalay zuusashada indhaha. Annagu garan mayno goorta ay dareemayaashu mas’uul ka noqon doonaan bixinta iyo waxa qaraarka ay yeelan doonaan, in kasta oo aan ognahay qaar ka mid ah qaababkeeda. Waxaan lahaan doonnaa “Ultra Steady Video” oo ay ugu wacan tahay xasilinta indhaha, waxaan yeelan doonnaa nooca “Ultra Clear mode” waxaanna u yeelan doonnaa Ultra Mugdhow hab muuqaal ah habeenkii.
Intaa waxaa u dheer, sawirka casuumaada ayaa muujinaya taas kaamirada hore, ama kaamirooyinka sababta oo ah weli garan mayno, jirka ayey ku dhex qarsoon doonaan oo leh nidaam pop soo jiidasho leh sida kan aan marar badan ku aragnay suuqa. Marka, waxa kaliya ee la sugi karaa in 28-ka Ogosto uu yimaado si uu ula kulmo taxanaha cusub ee OPPO Reno2. Waan arki doonnaa imisa xarumood ayaa la bilaabaa, iyo haddii ay dhammaantood yihiin 5G ama waxaan sii wadaynaa kala-goynta qaybta iyada oo ku xiran modem-ka la doortay.
La wadaag OPPO Reno2 ayaa lagu soo bandhigi doonaa Ogosto 28 oo leh afar kaamirooyin iyo 20x zoom optical ah